Fokanye iminyaka eli-10, Iveki yefashoni yaseHeineken Lagos ibe negalelo ekubumbeni ikamva lefashoni yaseAfrika, ngokuqulunqa iqonga labadali baseAfrika ukubonisa ubuchule babo, ukubonelela kwintsebenzo kunye nokufikelela kumathuba emakethi, ukufundisa kunye nokuqeqesha italente yabaselula, ukuqhuba incoko eqhutywa yimpembelelo ngesitshixo Abathathi-nxaxheba kananjalo nokuba baphambili ekuphuhliseni umzi-mveliso wethu wasekhaya kusetyenziswa oololiwe be-SHF kunye neBhunga loKhuthazo lokuthengisa kumazwe angaphandle laseNigeria.
Kulo nyaka, kubhiyozelwa iveki yefashoni ye-Heineken Lagos Ishumi leminyaka kwifashoni nayo yonke loo nto Imfashoni yaseAfrika; Ukuhanjiswa kweenkcubeko ezahlukeneyo, ubuninzi bemithombo yendalo kunye nobudlelwane boluntu obuvelayo, kunye nezakhono ezidlulisiweyo ukusuka kwesinye isizukulwana ziye kwesinye isizalo kwiindawo ezinendawo ekuyo nefashoni yase-Afrika. I-Lagos yeveki ye-2020 yobhaliso. HLFW 2020.
Kunyaka wayo we-10, iVeki yefashoni yeHeineken Lagos ihlala ingaphazanyiswa ziziphumo zobhubhane wehlabathi. Eli xesha lonyaka liza kuba yinto ehambelana nemiboniso yasesidlangalaleni neyedijithali, eya kuthi ihambisane nezikhokelo zeLagos State kunye ne-Federal Government ukunika abanomdla befashoni ngamava abaluleke kakhulu ngelixa bebonisa ubuhle kunye nobuchule befashoni yase-Afrika kwihlabathi. HLFW 2020 ..
Ukusukela nge-29 ka-Okthobha ukuya nge-1 kaNovemba ka-2020, uluntu luya kumenywa ukuba lujonge iingqokelela zomyili ngokusasaza bukhoma kunye nokhenketho olubonakalayo. Kuya kubakho amathuba okuba nenombolo yokukhetha Patrons kunye noluntu ukuba luze kwindawo yokubonisa yeefayile kunye nendawo yokuvula. Amagqabantshintshi avela kubaqulunqi ayakusebenzisa uluhlu lweetekhnoloji ukusuka kubuntu obuqinisekileyo ukuya kwimbonakalo ye-3D. I-Lagos yeveki ye-2020 yobhaliso.
Eli xesha, itekhnoloji yokufundisa kunye ne-e-commerce ibalulekile ukuze kuxhaswe ii-brand zase-Afrika ekufikeleleni kwiimarike ezintsha nakumathuba orhwebo. I-XRetail ngentsebenziswano ne-Afrikea iya kuthi okokuqala ngqa ihlelle ukhetho lwe-Afrika elungele ukunxiba, impahla kunye nobuhle bobuchwephesha bamava edijithali. Olu tshintsho lugqibeleleyo kumava okuthenga kwi-intanethi luya kubanjwa ukusuka nge-14 ka-Agasti ukuya kowe-16 ka-2020, kwaye luya kuvumela abathengi kunye neempawu zisebenzisane ngokukhuselekileyo. Uhlobo lwe-intanethi lwalo nyaka we-XRetail luvula uphawu kubaphulaphuli behlabathi abanomdla wokufumana kwaye bathengise ii-brand zase-Afrika.
Kulo nyaka, iVeki yefashoni yeHeineken Lagos iguqukele kwindlela entsha, itekhnoloji, kunye namajelo eendaba ukuhambisa ingqokelela yabayili ngendlela ebonakalayo enokuthi isabambe imincili ehambelana neHeineken Lagos IVeki yeFashoni.
U-Ejiro Amos Tafiri
Umsunguli weVeki yefashoni yeHeineken Lagos Omoyemi Akerele Ugqabaze ngamalungiselelo alo nyaka, HLFW 2020.
"Ngento enje yenzeka ngakuthi, imeko eqhelekileyo ayisiyombali kodwa sikhumbula ukuba ngaphandle koku, siphumeze umbono obalulekileyo. Sikhuthaziwe ukuba sibambelele nkqi kwaye esi sisombululo sisenze ukuba sikwazi ukuyila kancinci, ngaphandle kwemozulu ikhoyo ngoku. Kwiminyaka eli-10 sikhule isicwangciso esiliqili kwiMpembelelo, ukuDibana, abahlali, kunye nokuYila indalo. Ukukhula esikufumene kwezi ndawo kuphela kungumqondiso wokomelela, ukuqhuba, kunye neetalente ezikhoyo kwilizwekazi.
Njengomqondiso ozinikele ekukhuleni nasekuphuhlisweni koluntu, abaxhasi bez isihloko u-Heineken ngokusebenzisa eli qonga, unegalelo kuphuhliso lomzibi wefashoni wase-Afrika. Nks. USara Agha, Umanejala wePotifoliyo - IiNtloko zeNtlawulo zaNyaka eziPhambili, NB Plc, uphawule: “U-Heineken uthanda ubugcisa kunye nokuzinikela kwabo ekukhuleni kokudalwa kwelizwekazi kuhlala kungagungqi. Ndiqinisekile ukuba ixesha elizayo liza kwenza umbono wexesha elizayo lwefashoni eAfrika. "
I-ajenda yeVeki yeHineken Lagos yeVeki iya ngaphaya kokuyila. Ukumakisha unyaka wayo we-10, iqonga liqinisa ukuzibophelela kwabo ekudaleni inkqubo yendalo yamashishini azinzileyo e-Afrika, ukuqhuba ulwazi ngokwabelana, ukufunyanwa kwezakhono, ukuphuculwa kolutsha ngemisebenzi kunye nokudala ubutyebi ngokusekwa kwe-SHF Prism - indawo yemfashini ebonakalayo eya kuthi ibonelele abadali abancinci ngemfundo yefashoni, izibonelelo zemveliso kunye noluntu lwabacebisi kunye nabatyali mali abazifunayo.
I-SHF Prism ijolise ekuxhaseni isizukulwana esilandelayo sabadali bemveliso yaseAfrika kunye namashishini ngokucebisa, ukutyala imali, kunye nemfundo ukukhuthaza amathuba emisebenzi kunye nobutyebi kunye nokwenziwa kweshishini lemfashini laseAfrika.
Iimodeli zefashoni, ezokufikelela, kunye nezoBuhle ziyamenywa ukuba zifake isicelo se-XRetail ngekhonkco kwiLio yeVeki yeVeki yeLagos kwi-Instagram. Izicelo zivaliwe ngoJulayi 26, 2020.
# HLFW20 Ishumi leminyaka kwifashoni U-Ejiro Amos Tafiri Eki Orleans veki yefeneken lagos I-Heineken Lagos yeVeki ye-10th Isikhumbuzo Iveki yefashoni ye-Heineken Lagos 2020 Indlu yeKaya IAMISIGO Lisa Folawiyo Meena Nkwo